A magazine show for women. Four women, with very different characters, co-host and present and discuss current issues affecting women
မျက်ကွင်းညိုခြင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ သိကောင်းစရာ
26 ส.ค. 2558 | 517 Views
19 Aug 2015 | 619 views အခုနွေရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့ မိန်းကလေးများအတွက် အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းလေးကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအသားအရေကနူးညံ့တဲ့အတွက် နွေ၊မိုး၊ဆောင်း ရာသီတိုင်း အသားအရေထိန်းသိမ်းနေရတာပါ။ သို့သော်လည်း ရာသီတစ်ခုစီအတွက် အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းက မတူပါဘူး။ အခုကတော့
Mayonnaise Skin Care
19 Aug 2015 | 569 views Mayonnaise (မယိုးနစ်(စ်)) ဆိုတာကတော့ ဘာဂါထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အရွက် saladမှာဖြစ်ဖြစ် စားနေကျ အရာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ စားလို့လည်းအရသာရှိသလို အလှအပအတွက်လည်း အသုံးဝင်တဲ့ အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Mayonnaise ကို ဆံပင်သား ကျန်းမာဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
18 Aug 2015 | 606 views မျက်နှာအသားအရေ လျော့တွဲကျမှုကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ကုသနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကို Hollywood မှ ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ မျက်နှာအသားအရေကို ကာကွယ်ရန် မျက်နှာလိမ်းcreamများ၊ Laser ဖြင့်ကုသမှုများ၊ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုများ နှင့် ဆေးထိုးခြင်းများပြုလုပ်ကြပါတယ်။ သို့သော်ထိုနည်းလမ်း
Toner အသုံးပြုပုံနှင့် ကောင်းကျိုးများ
18 Aug 2015 | 530 views မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့သူတိုင်းအတွက်လည်း Toner ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အသားအရေအတွက်လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုထဲမှာအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ Toner ကိုတော်တော်များများက အဓိပ္ပါယ်မှားယွင်းဖွဲ့ဆိုတတ် ကြတယ်။ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု ပညာရှင်တွေကတော့ Toner ဟာ အသားအရေရဲ့ PH level ကိုထိန်းညှိပေးပြ
ပျိုမေတို့ ခရီးသွားစဉ် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်အချက်များ
17 Aug 2015 | 523 views မိန်းကလေးတွေဆိုတော့ ခရီးသွားရင် ပထမဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ လုံခြုံစိတ်ချမှုကို လိုအပ်ပါတယ်။ အ၀တ်အစား၊ အပြင်အဆင်တွေကို လုံလုံခြုံခြုံရှိအောင် ၀တ်ခြင်းက မိမိအတွက် ပိုမိုလုံခြုံမှု ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ခရီးသွားစဉ် ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့- သက်တောင့်သ
19 Jun 2019 | 977 Views
19 Jun 2019 | 236 Views
19 Jun 2019 | 575 Views
19 Jun 2019 | 215 Views
19 Jun 2019 | 246 Views
17 Aug 2015 | 543 views ဟင်းနုနယ်ရွက် ဟင်းနုနယ်မှာသံဓာတ်တွေအများကြီးပါတဲ့အတွက် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့စားသုံးသင့်သော အရွက်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဟင်းနုနယ်ရွက်ဟာ မျက်စိအားကောင်းစေပြီး ကိုယ်တွင်းစနစ်ကိုလည်း သန့်စင်ပေးပါတယ်။ ဟင်းနုနယ်ရွက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်တဲ့ အခါ Vitamin A အဖြစ်သို့ြေ
မျက်နှာအလှပေါ်လွင်အောင် Highlight ပြုလုပ်ခြင်း
14 Aug 2015 | 579 views မျက်နှာHighlight ဆိုတာကတော့ မိမိမျက်နှာမှာ ဖုံးကွယ်ချင်တာကို ဖုံးထားပြီး ပေါ်လွင်ချင် တဲ့နေရာကို Highlight လုပ်ပြီး အလှဖော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Highlight မှာလည်း အရောင်မျိုးစုံရှိတာကြောင့် မိမိအသားရောင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Highlight အရောင်ကို မိတ်ကပ်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပ
14 Aug 2015 | 519 views ဒေါသကြီးခြင်းအားဖြင့် ရုတ်တရက် လေဖြတ်လေငန်းဖြစ်ခြင်း နှင့် Heart attack များဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒေါသထွက် ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပြီး ၂နာရီအတွင်းက နှလုံးကိုထိခိုက်နိုင်ချေအမြင့်ဆုံး အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သာမာန်လူများအတွက်ပင် ဒေါသထွက်ခြင်းက နှလုံးတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တြာေ
13 Aug 2015 | 511 views (၁) သက်သက်လွတ်စားသောနေ့တွေ အသားမပါပဲစားသောနေ့တွေမှာဆိုရင် ပဲပိစပ်၊ ပဲနီလေးတို့ကိုစားသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့တာတွေကိုစားပေးမယ်ဆိုရင် ငြီးငွေ့မှာလည်းမဟုတ်သလို ၀ိတ်တက်မှာလည်းမပူရပါဘူး။၀ိတ်ချတဲ့နေရာမှာလည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ (၂) နေ့စဉ် ကိုယ်စားသုံးတဲ့ အစားအစာစာရ
12 Aug 2015 | 507 views ၀ိုင်သည် လူတွေကို ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးရုံသာမက ကျန်းမာရေးကိုပါ အများကြီး အထောက်အကူပြုပါတယ်။၀ိုင်ကို တစ်နေ့မှာတစ်ခွက်သောက်ရုံနဲ့ တစ်နေ့တာလုံး ကျန်းမာပြီးတော့ လန်းဆန်းတက်ကြွမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ၀ိုင်ကိုသောက်ခြင်းဖြင့် ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ၀မ်
12 Aug 2015 | 514 views ဆောင်းရာသီမျာအဖြစ်များတဲ့အအေးမိလည်ချောင်းနာတွေအတွက်လက်ရှိမိမိသောက်နေကျအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ နောက်ဆေးတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဆေးကတော့ ASPIPIN ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဆေးကတော့ အကောင်းဆုံးနဲ့ အလျင်မြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ASPIPIN ဆေးပြား(၂)ပြ
ข่าวทั้งหมด 354 ข่าว 30 หน้า